Ezigbo Ụra 8 na Ụlọ Ahịa Ụlọ Obere Nweta na 2018
Ịzụta Nduzi TV & Ụlọ ihe nkiri Ụlọ
by Patrick Hyde na Meredith Popolo
Mee ka ụra gị ma ọ bụ ebe ị ga-aga ebe ị ga-anọ na-eme fim
Mbụ dị ukwuu dị n'etiti ụlọ akwụkwọ sekọndrị na kọleji? Ndepụta ịzụ ahịa ụlọ akwụkwọ gị na-agụnye TV. Mgbe ọ na-abịa ịzụta TV maka ọnụnọ gị ma ọ bụ ụlọ mposi-ụlọ, ọ kaghị mma. E wezụga na ihe ka ọtụtụ ụmụ akwụkwọ kọleji na-arụ ọrụ na ụzụ ahịa, nnukwu TV na-eburu ọtụtụ ohere, ọ ga-abụkwa na ị ga-anọdụ ala n'ogo ole na ole site na ihuenyo ahụ. Iji nyere gị aka na TV ịchọta ụra gị ma ọ bụ ụlọ mbụ, anyị na-agbakọta isii kachasị mma (gụnyere ihe ngosi) na ahịa nke a ga-eme ka ebe gị bụrụ ebe ị ga-ahụ maka ihe nkiri nkiri.
Ihe dị 32 nke anụ ọhịa VIZIO D32h-D1 nwere ihe kachasị mma na nkà na ụzụ dị elu na klas ya. Na WiFi wuru na kwadoro UI na-eme ka ọ dị mfe karịa mgbe ọ bụla ị na-ekiri ọdịnaya ịntanetị site na nkasi obi nke bed bed gị.
Ka anyị jiri ihe kachasị dị mkpa malite: àgwà foto. Mkpuchi 720p adịghị na eriri elu dị elu nke na-ere ahịa maka okpukpu abụọ ọnụahịa, ma ọ na-enye foto dị na HD. Pixel na-enwu enwu na ngwunye ọkụ ọkụ nke zuru oke nke na-enye nha ọkụ dị iche iche.
Ihe oyiyi na-enye afọ ojuju na-akwado na nkà na ụzụ na-enweghị atụ. E wezụga WiFi, ntinye ngwa ngwa na-eme ka ọ dị mfe iji nweta vidiyo na ọrụ ọdịyo gị kacha mma site na TV gị. Ogologo oge ị nwere akaụntụ, ị nwere ike ịnweta Netflix, Pandora, YouTube, Hulu, Spotify na ndị ọzọ.
Edobere D32h-D1 iji gosipụta ọnọdụ ọhụrụ kachasị elu. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ọ na-ese onyinyo (28.8 x 7.9 x 19.1) nwere ụkwụ ụkwụ abụọ na ala. Maka ndị chọrọ ịchekwa ohere oche, TV nwere ike ịdakwasị n'elu mgbidi dorm gị.
Lelee nyocha ndị ọzọ anyị nwere banyere Vizio TV kasị mma dị na ahịa taa.
Mgbe ị na-emefu ego, ị ghaghị ime mkpebi ụfọdụ. N'ihe gbasara TV, nke ahụ nwere ike ịpụta ịhapụ ihe nlereanya kachasị ọhụrụ maka ihe ntutu isi. Ọ dị mma maka gị, nke a bụ 19-inch nke anụ ọhịa ahụ ka bụrụ ọkacha mmasị. Ọ bụ 720p LED HDTV na otu Motion Rate nke 120, nke na-enye gị ohere ịnweta oke ọsọ ọsọ na-enweghị ụkọ. Ngosipụta ahụ na-emepụta agba chaa chaa, ekele maka njirimara Wide Color Enhancer Plus, ọbụna mgbe ị na-ekiri ọdịnaya ndị na-abụghị HD. N'iji 17.9 "x 12.4" x 4.9 ", ọ dị ntakịrị iji daba na kichin ma ọ bụ ebe ihi ụra. Na-ekwu banyere obere ụkwụ, Samsung a bụ Energy Star kwadoro ka ị nwee ike ịchekwaa na ọkụ eletrik gị ma na-enyere aka gburugburu ebe obibi Ọ bụrụ na ị na-etinye n'akpa uwe gị niile nchekwa ike, ị nwere ike bulite na ụdị 28-anụ ọhịa ahụ maka ego ole na ole ọzọ.
Lelee nlezianya ndị ọzọ anyị nwere banyere TV ndị kacha mma a na-enweta na ahịa taa.
Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ na ị ga-abanye n'ụlọ akwụkwọ ahụ na PC desktọọpụ, tụlee itinye ego na nyocha ma na-asagharị TV kpamkpam. Nke a na-arụ ọrụ nke ọma maka ụmụ akwụkwọ ndị na-aga na-ekiri ihe ka ukwuu n'ime ọdịnaya ha site na ntanetị ọrụ dị ka Amazon na Netflix karịa ndị na-enye ndị na-enye gị ihe n'ọdụ ụgbọ mmiri. Ndị na-aga nyocha ụzọ kwesịrị ịtụle Acer R240HY, nke kachasị mma maka nyocha 1080p na ahịa.
Igwe ihu 23.8 nke anụ ọhịa ahụ nwere ezigbo mkpebi nke EziHD nke 1920 x 1080 pikselụ ma bịa na spellbinding 100 Nde: 1 ọdịiche dị oke. Mgbanwe Igwe Na-aga IPS (IPS) na-egosi na agba dị iche iche dị n'akụkụ ọ bụla. Nke ahụ pụtara na ndị enyi gị na-ekiri na n'elu ihe ndina ga-ahụ ihu igwe kachasị elu na otu ihe ahụ ị na-eme site na oche gị.
Ihe nkedo a na-ekpuchi anya, nke na-adi nma na-adi nma na-eme ka o di mfe ikpuo ihuenyo abuo. Ntinye VGA, DVI na HDMI na-eme ka ọ dị mfe karịa mgbe ọ bụla iji nweta kọmputa site na kọmputa ma ọ bụ ekwentị. Naanị ịdọ aka ná ntị na nlekota a abụghị ihe ndozi, n'ihi ya ọ ga-adị mkpa ịnọdụ ala na tebụl gị.
TV ndị na-atụle sentimita 19 na-aghọ ihe n'oge gara aga, mana ndị na-emepụta ụlọ ahịa ka na-arụ ọrụ nke ọma, nke na-adịghị akwụ ụgwọ na-arụ ọrụ nke ọma na obere oghere. Mgbanaka E195BV-SHD bụ TV 720p HD na-egosi na LCD na HDMI njikọta. Ọ na-eji 19,8 x 14.8 x 4 sentimita asatọ ma jiri kilo 7.6, n'ihi ya, ọ dị ntakịrị obere ma ọ bụrụ na ọ dị mfe ịchọta ebe ọ bụla ị nwere oghe.
Ndị nyochaa na Amazon kwudịrị na Scepter E195BV-SHD na-arụ ọrụ dị ka ọnụ ala na-abụghị TV, karịsịa na ebe dịka ime ụlọ ma ọ bụ kichin. Ụfọdụ ndị ọbụna jiri ya dịka ihe nlekota PC ma kwuo na ọrụ TV a dị mma maka ịgbanwe n'etiti egwuregwu egwuregwu, TV na PC.
Ọhụụ a na-emepụtapụta, onye a na-ewepụta 32-incher na-ewepụta ihe ngosi, 720p HD foto na agbaziri agbazi, ekele ya agba Master Engine atụmatụ na nwere nkwanye ùgwù ume ume 60Hz.
TV n'onwe ya nwere ihe mara mma, nke nwere ụkwụ abụọ na ihe dịka 28.7 "x 18.7" x 7.2 "na nkwụnye ahụ. Oghere nke TV nwere oghere ndị a chọrọ iji kweta VESA 100, nke na-eme ngwa ngwa ọ dị mfe ịdakwasị mgbidi gị ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịchekwa ohere. Ọ bụ ezie na ọ nweghị ọrụ TV, ọ nwere ọtụtụ ntinye, gụnyere HDMI abụọ na otu ọdụ ụgbọ USB iji nye gị ohere ịmepe ọ bụla ederede.
Nke a 32-inch LED TV na-abịa na wuru-na abụọ-band Wi-Fi nke na-ejikọta na netwọk gị n'ụlọ. Maka mmefu ego, ị ga-enwe obi ụtọ na 720p HD mkpebi na 60GHz ume ọnụego nke na-ejigide ngwa ngwa ime ihe. Ihe kachasị amasị anyị banyere telivishọn a bụ njirimara ọrụ njirimara ya, yabụ na ị gaghị aga ịnyagharị menus dị mgbagwoju anya iji nweta ihe ngosi na ngwa gị kachasị amasị gị. O nwekwara otutu ntinye, gụnyere atọ HDMI (otu w / ARC) na otu USB.
TV n'onwe ya dị ka ọ dị mma, ma ebe dị mfe ya nwere naanị 20 bọtịnụ, nke bụ ọkara nke nke dịpụrụ adịpụ, gụnyere bọtịnụ ụzọ mkpirisi na ngwa ndị a dị egwu: Netflix, Amazon Instant, na Vudu. Kasị mma, ma ọ bụrụ na ị nụlarị ụra n'àkwà ma ghara ịbanye n'ime ime obodo ahụ, ịnwere ike ibudata ngwa mkpanaka ahụ iji gbanwee ama gị n'ime clicker.
Mgbe ị naghị enwe ohere iji rụọ ọrụ na TV gị, ịnweta TV dị mma bụ ihe dị mma n'ihi na ọ pụtara na ịnweghị ịchọta ohere maka gụgharia egwuregwu mgbasa ozi ma ọ bụ consoles egwuregwu iji webata ọdịnaya weebụ gị TV. Sony KDL32W600D bụ TV na-enyocha 32-inch nke ọma nke dabara na ọrụ a. Ọ nwere 720p kpọmkwem-udo LED ihuenyo na abụọ HDMI ntinye na abụọ USB ọdụ ụgbọ mmiri, ịhụ ezigbo connectivity.
Ugbu a, ka anyị kwuo banyere ihe kpatara Sony KDL32W600D smart. TV na-arụ WiFi na ngwa ngwa nbudata ka ị nwee ike ịnweta ọdịnaya site na ọtụtụ ọrụ vidiyo isi, gụnyere YouTube, Netflix, Hulu na Amazon. Ị nwekwara ike igwu egwu dị ka ihe nkiri na egwu ozugbo site na mkpanaka USB site na ịrapara n'otu n'ime ọdụ ụgbọ USB abụọ ahụ.
Ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị na-enyocha ntụrụndụ Amazon enwewo obi ụtọ na TV a, karịsịa ma a bịa n'ihe osise dị mma. Naanị ndị na-enyocha na-achọpụtaghị bụ ezigbo mma, yabụ ị nwere ike ịchọrọ itinye aka na obere obere ụda ma ọ bụrụ na ị nwere nchegbu ọdịyo.
Hụ nlezianya ndị ọzọ banyere TV Sony kachasị amasị anyị maka ịzụta.
E nwere aha ọma maka ndị na-ahụ maka ihe nkiri na ebe obibi papa m karịa n'ụlọ nkwụ. Ruo ọtụtụ afọ, bọmbụ ndị na-enweghị nchebe, nkwekọrịta dị oke nro, na mgbagha mgbagwoju anya nke wiil mere ka ha ghara ịga maka obere oghere. Oge ndị ahụ adịkwaghị. XGIMI Z4 Aurora na-ebute ụzọ ọhụụ nke ọgbọ ọhụụ nke nwere ike ịmepụta nnukwu ihe oyiyi site na obere ntanetị. Nke kachasịsị mma, nhọrọ ọnụọgụ nhọrọ na ọnye-egwu igwe na-eme ka ọ dị mfe ịnweta ọdịnaya intaneti.
Onye a na-agba ọkụ Smart 700 700 nke a nwere ike ime ka mgbidi dorm blanket gị dị n'ime ihuenyo 300-inch. WXGA (1200x800) ihuenyo na-akwadokwa 1080P, 2K na 4K usoro site na iji usoro mmezi ihu na ntaneti iji mepụta foto mara mma. Ndị na-agba 3D ga-ahụ onye na-agbanwe agbanwe na-agbanwe agbanwe nke gbanwere vidiyo 2D ọ bụla na 3D. Ntughari isi ihe na-enye gị ohere ịchịkwa ahụmịhe maka ntọala na-enweghị ihe ọhụụ na nkedo oyiyi.
Nke a bụ ụlọ ọrụ ntụrụndụ niile, nke pụtara na ọ na-abịa na usoro mgbanaka nke Harman Kardon. Eziokwu ahụ bụ na ngwaọrụ ahụ nwere ike ịnapụta ụdị ụda olu ahụ na foto dị na obere igbe nke na-erughị pasent atọ bụ ezigbo ihe na a ga-enwe ekele na ọnụ ụlọ dormrophobic.
Enwere enyi na-achọ ịhapụ Netflix ma ọ bụ vidio YouTube? Nsogbu adịghị. Bluetooth, Airplay na Miracast arụ ọrụ na-ahapụ gị ịmekọrịta vidio na ihuenyo (ma ọ bụ mgbidi) na sekọnd. Ngwaọrụ gam akporo na-agụnye ngwa ngwa preprogrammed.
Lelee nyocha ndị ọzọ anyị nwere banyere ihe nrụpụta kachasị mma dị na ahịa taa.
N'oge ahụ, ndị edemede anyị ọkachamara na-etinye aka na nyocha na ide ederede eche echiche na nyocha nke onwe ha maka ngwaahịa kacha mma maka ndụ gị na ezinụlọ gị. Ọ bụrụ na ịchọrọ ihe anyị na-eme, ịnwere ike ịkwado anyị site na njikọ anyị họọrọ, nke na-arụ ọrụ anyị. Mụtakwuo banyere usoro nyocha anyị .
Ndị 8 na-ekwu okwu n'Ịntanet dị elu na nke 2018
Onye ọsụ ụzọ na-agbakwụnye Elite BDP-85FD / BDP-88FD Blu-ray Disc Players
Anthem MRX "20" Usoro Ụlọ Ihe nkiri Ụlọ - Gaa Ọgwụgwụ Elu
Ịzụta Ngwaahịa Agbanweghachi - Ihe Ị Kwesịrị Ịma
Ndị na-ekesa ngwaahịa na Ụlọ ihe nkiri Ụlọ ihe nkiri
Ntuzi zuru ezu maka ikiri 3D na Home
Ịzụ TV - Ihe Ị Kwesịrị Ịma
Ọ bụrụ na ị na-azụ a New TV Gụọ Nke a mbụ
Otu esi echekwa Gmail Keyboard Shortcuts
Urban Slang Dictionary: Online Acronyms, Kpeokwu na Idiom
The Top atọ Social Bookmarking saịtị na Web
Ịghọta nkwụnye ụgwọ
Marantz kwupụtara SR5009 Network Home Theater Receiver
Nduzi Ịwụnye Beta Ozi na OS Lion Lion
Ihe mere i ji chọọ nyocha nke Malware nke abụọ
Nyochaa: Oge oke oyibo Facebook App
Oculus Rift: A Na-ele Oculus VR's Flagship Ezi Virtual Head
Mụta otú e si dee akwụkwọ ndị ọbịa ma ọ bụ jiri otu na saịtị gị
50 YouTube Njikọ iji lelee Movies Christmas na Free maka Free
Ihe mere egwu egwu nke Minecraft ji dị oke
8 Laptọọpụ Batrị Kacha ọhụrụ kachasị mma maka Buy na 2018
5 Ga-enwe Ngwá Ọrụ Nche maka iPhone
Gịnị Bụ BSA Njikwa?
Esi kpochapụ Data Cache na gam akporo gị
Kedu ihe bụ ego ego Bitcoin?
MTU Vs. Network. Nka Teta TCP kachasị elu